अर्घाचाँची, रुपन्देही र बाँकेका तीनको मृत्यु : सघन उपचार कक्ष अभाव - नेपालबहस
अर्घाचाँची, रुपन्देही र बाँकेका तीनको मृत्यु : सघन उपचार कक्ष अभाव
| १८:५४:५९ मा प्रकाशित
२९ असोज, रुपन्देही । बुटवलमा सघन उपचार कक्षका अभावमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको ज्यान गएको छ । पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै सघन उपचार कक्ष बिरामीले भरिएका छन् ।
बुटवलको धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा शय्या नपाएपछि दाङको बेलझुण्डी अस्पताल लैजाँदै गर्दा थप एक सङ्क्रमितको बाटामै मृत्यु भएको छ । अर्घाखाँची, भूमिकास्थान–९ का ७३ वर्षीय पुरुषको दाङ लैजाने क्रममा आज बिहान पौने ८ बजे बाटाेमै मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा विष्णु गौतमले जानकारी दिए ।
अर्घाखाँचीबाट उपचारका लागि बुटवल आएका पुरुषको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गर्दा गत मङ्गलबार रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो । त्यसपछि उनलाई कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेशनमा राखिएको थियो । उनको बुटवलमा सघन उपचार कक्ष शय्या नपाइएका कारण मृत्यु भएको छ । सङ्क्रमित पुरुषको स्वास्थ्यमा गए राति थप समस्या देखिएपछि अस्पतालले बेलझुण्डीस्थित कोरोना अस्पतालमा रेफर गरेको थियो ।
श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि पुरुषलाई असोज १० गते साँझ अस्पतालको प्रि–आइसोलेशन वार्डमा भर्ना गरी उपचार शुरु गरिएको थियो । सङ्क्रमितको श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उनको रोगको प्रकृतिअनुसार प्लाज्मा थेरापीलगायत उपचारका सबै पद्धति अपनाउँदासमेत बचाउन नसकिएको जनाइएको छ । जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र भेरी अस्पतालको समन्वयमा शव व्यवस्थापन गरिएको छ ।
यसैबीच बाँकेमा आजै थप ६४ कोरोना सङ्क्रमित निको भई घर फर्किएका छन् । यससँगै बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमणबाट निको हुनेको सङ्ख्या एक हजार ९६३ पुगेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकेमा कोराना सङ्क्रमितको निको हुने दर ७६।८६ प्रतिशत छ । अब जिल्लाका विभिन्न आइसोलेशनमा ५६५ सङ्क्रमित छन् । बाँकेमा अहिलेसम्म दुई हजार ५५४ जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ ।
आज थप ३५१७ जनामा कोरोना पुष्टि, ४०९६ संक्रमणमुक्त ! १३ मिनेट पहिले
वालिङका संक्रमित वृद्धको उपचारको क्रममा मृत्यु ३ घण्टा पहिले
गाली बेइज्जती गर्नेलाई साइबर अपराधको मुद्दा लगाउने तयारी ५ मिनेट पहिले
खुशीको खबर ! इन्स्टाग्रामबाटै अबदेखि चार घण्टा लाइभ १८ मिनेट पहिले
हिमालको थुम्का र हिम शृङ्खलाको दृश्य ३० मिनेट पहिले
अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला ४१ मिनेट पहिले
अब पनि सग्लो नेकपा रहला र ? ३ घण्टा पहिले
पोखराका ६० सहित गण्डकी प्रदेशमा ९८ जनामा संक्रमण पुष्टि ५ घण्टा पहिले
अर्थमन्त्रीलाई १३ बुँदे सुझाव पत्र १७ घण्टा पहिले
हुम्लाको चेला सामुदायिक वनमा भीषण आगलागी, जडिबुटीका बिरुवा जलेर नष्ट ९ घण्टा पहिले
बलिउडका सुपरस्टार नरेश कनोडियाको निधन ३ दिन पहिले
कांग्रेसका सबै सांसदले दशैँभत्ता फिर्ता गर्ने २ हप्ता पहिले
नेकपाको सचिवालय बैठक आज पनि स्थगित ४ हप्ता पहिले
गुल्मीका शिक्षकमा कोरोना देखिएपछि अस्पताल सिल ५ महिना पहिले
स्मार्टफोन टावरमा आगजनी, चन्द समुहका सदस्य पक्राउ ९ महिना पहिले
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा सर्जिकल माक्स उत्पादन गर्न शुरु ८ महिना पहिले